मंसिर २४, २०७६ ०६:३६:१३
हेटौंडाको क्याम्पाडाडा नजिक दुर्घटना, ६ जना घाइते मंसिर २३, २०७६
हेटौंडामा टाटा-सुमोको मनपरी, कृतिम अभाव देखाई दोब्बर भाडा असुल्दै मंसिर २२, २०७६
हेटौंडाका हरेक सडकमा सवारी जाम, छैन ट्राफिक व्यवस्थापन हेटौंडा बजारको हरेक सडकमा सवारी-साधन अस्तव्यस्त हुने गरेका छन्। साँघुरा सडक त्यसैमाथी दुवै तर्फ पार्किङ्ग, र ठुला गाडी लोड अनलोड गर्दा हेटौंडाका हरेक सडकमा अहिले सवारी जाम हुने गरेको छ । बिशेषगरी हेटौंडाका मुख्य सडक स्कुल रोड, पारिजातपथ, कान्तिराजपथ, राप्तिरोड, अजरअमर रोड लगाएतका सडक निकै अस्तव्यस्त हुने गरेका छन् । खासगरि पार्किङ्गको समस्याले र ट्राफिक व्यवस्थापन गतिलो नभएकाले हेटौंडामा सडकमा सवारी जान हुने गरेको हो। हुनत हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले निर्णय नै गरी पार्किङ्ग र नो पार्किङ्ग स्थान नतोकेको होईन तर निर्णय मै सिमित हुने यहाको स्थानिय सरकारको निर्णय र नाम मात्रका हेटौंडाका ट्राफिक प्रहरीका कारण यहाँ न पार्किङ्ग व्यवस्थित हुन सकेको छ नत ट्राफिक व्यवस्था मंसिर २२, २०७६
नझुक्किनुस् है : हेटौंडाका अबैध सस्था र बैधानिक सस्था यी हुन् स्वास्थ्य र शिक्षा निकै सम्बेदनशील बिषय हो । तर पछिल्लो समय यस क्षेत्रमानै ब्यापारीकरण बढ्दै गरेको छ । यस्ता सम्बेदनशील क्षेत्रमा नै बढी व्यापारीकरण हावी भयो भने के होला ? यस्तै एउटा बिषय हो, हेटौंडामा खुलेका र संचालित ट्युसन,पुर्व तयारि कक्षा, विभिन्न भाषा शिक्षा तथा परामर्श दिने सस्थाहरु । यसका बिषयमा हामीले निकै समाचार बनायौ, स्थानीय प्रशासनदेखि शिक्षा मन्त्रालय सम्म घच्घच्याउने काम गर्यौ । प्रशासनले चासो नदेखाएको भने भन्न मिल्दैन सकेसम्म प्रयास गर्यो । मंसिर १९, २०७६
मकवानपुरका सिडिओको ३ महिनामै सरुवा, भक्तपुरका नारायण भट्ट आउने मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशीको सरुवा भएको छ । उनि मकवानपुर आएको ३ महिना नहुदै सरुवा भएको छ । मकवानपुरमा भक्तपुरका नारायण भट्ट आउने भएका छन् । साथै गृह मन्त्रालयले मकवानपुर सहित पाँच जिल्लाका सिडिओ हेरफेर गरेको छ । पर्साका सिडिओ नारायण भट्टराईको चितवनमा सरुवा भएको छ भने चितवनका जितेन्द्र बस्नेतको पर्सामा सरुवा भएको छ । त्यस्तै लमजुङका सिडिओ पनि फेरिएका छन् । डा डिजन भट्टराईलाई अध्यागमन विभागमा सरुवा गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयकी सहसचिव हुमकला पाण्डेलाई भक्तपुर तथा बरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत लक्ष्मण बहादुर खड्कालाई लमजुङ पठाइएको छ । मंसिर १८, २०७६
मकवानपुरगढीको जंगलमा महिलाको शव फेला मकवानपुरको मकवानपुरगढीको जंगलमा महिलाको शब फेला परेको । गत १४ गतेदेखि हराएकी मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नं ४ की प्रितीमाया पाख्रिन सामरी नजिकको जंगलमा मृत भेटिएकी हुन् । मंगलबार (आज) बिहान ३९ वर्षीया पाख्रिनको शव देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । खबर पाएपछि प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख (प्रहरी उपरीक्षक) मुकेशकुमार सिंहले जानकारी दिए । मंसिर १७, २०७६
हेटौंडामा बोलेरो दुर्घटना हुदा ३ जना घाइते हेटौडा उपमहानगरपालिका-८ कमाने स्थित सनउड कोलनी नजिकै बोलेरो गाडी दुर्घटना भएको छ । कुखुरा बोक्ने बोलेरो ब्रेक फेल भएर दुर्घटना हुँदा चालक सहित ३ जना घाईते भएका छन् । ना४ त ७२०७ नम्बरको गाडि ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ घाइते हुनेमा चालक पर्सा भेडीयारीका २२ बर्षीय सजाद खान, भारत मोतीहारीका ३० बर्षीय प्रवेश आलम र मोतिहारीका १९ बर्षीय असर्थ महमद मिया रहेका छन् । घाईतेको हेटौंडा अस्पतालमा उपचार भैरहेको बताइएको छ । मंसिर १७, २०७६
हेटौंडा आउदै गरेको सुमो देउरालीमा दुर्घटना हेटौंडा–काठमाडौं सडकखण्ड अन्तर्गत मकवानपुरको देउरालीमा टाटा सुमो गाडी दुर्घटना हुँदा १२ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये तीन जनाको अवस्था गम्भीर छ । मंसिर १६, २०७६
मोटरसाइकलमा ट्यांकी नै नयाँ बनाएर चरेस ओसार्ने हेटौंडाबाट पक्राउ मकवानपुर प्रहरीले लागुपदार्थ ओसारपसार गर्ने व्यक्ति निकै समाउछ बिशेष गरी भारततर्फ लादै गरेका गाँजा,चरेस हेटौंडामा बढी समातिन्छन्। फेरी हेटौंडामा समातिएका ओसारपसार गर्ने व्यक्ति भने थरि-थरिका जुक्ति लगाउने भेटिन्छन्। कोहि गाँजा कै भोटो बनाएर गाँजा ओर्साछन् भने कोहि गाडीको नम्बर प्लेट भित्र लागुपदार्थ बोकेर हिड्छन्। यसपालि यो भन्दा खतरनाक व्यक्ति समातिएका छन् जो मेकानिकल इन्जिनियर जस्तै रहेछन् प्रहरीले बा.२५ प ८७८३ नम्बरको ग्ल्यामर मोटरसाइकलमा सवार एक व्यक्तिलाई लागुपदार्थ चरेससहित पक्राउ गरेको छ। ति व्यक्तिले उक्त मोटरसाइकलको सिटमुनी नयाँ पेट्रोल ट्यांकी बनाई तेलको पाइप समेत नयाँ ठाउँबाट तानेर मोटरसाइकलको ट्यांकीमा भने चरेस राखेर हिडेका रहेछन्। प्रहरीले कति चरेससहित कसलाई समातेको हो भन्ने खुलेको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भोलि पत्रकार सम्मेलन गरि उक्त व्यक्ति सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। मंसिर १६, २०७६
हेटौंडाको सुन पसलबाट गहना चोरेर भाग्दै गर्दा एक युवक पक्राउ सुनको गहना चोरेर भाग्दै गर्दा एक युवा समातिएका छन्। आज हेटौंडा -१० बासुदेव मार्गमा रहेको केदारनाथ सुनचाँदी पसलबाट करिव साढे ४ तोला गहना लिएर भाग्दै गर्दा मकवानपुर भीमफेदी गाउँपालिका सिस्नेरीका अन्दाजी २२ बर्षिय सुरज ओली समातिएका हुन्। सुनको औंठी र ब्रासलेट लिएर भाग्दै गर्दा उनलाई व्यवसायीले समातेर प्रहरीलाई जिम्मा लगाएका थिए। मंसिर १६, २०७६
हेटौंडामा अझै २ दर्जन इन्स्टिच्युट अबैध, प्रशासनमा उजुरी तर हुदैन कारवाही हेटौंडामा शैक्षिक परामर्श, पुर्व तयारी कक्षा, ट्युसन तथा भाषा पढाउने सस्था ४ दर्जन भन्दा बढी छन्। केहि समय अघिसम्म शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता सस्थाको संचालन अनुमति दिने गर्थ्यो। प्रदेश सरकार बनेपछि यस्ता सस्थाको संचालन अनुमति प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिने गरेको छ। हेटौंडामा जम्मा ४ वटा कन्सल्टेन्सीले मात्र शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर संचालनमा थिए केहि समय अघि सम्म। बिद्यार्थी संग चर्को शुल्क लिने, सरकारको कु मंसिर १४, २०७६
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको टेन्डर प्रक्रिया लफडा : उच्च अदालतको आयो यस्तो फैसला आर्थिक बर्ष २०७६-०७७ का लागि बिज्ञापन कर संकलन सम्बन्धि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले दोस्रो पटक गरेको टेन्डर प्रक्रिया बदर भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आशय सुचना समेत निकालिसकेको अवस्थामा पुनः टेन्डर आब्हान गरी दोश्रो कम्पनीलाई टेन्डर पारेपछि पहिले टेन्डर परेको आकृति एडभटाईजीङ, बिराटनगरले हेटौंडा उपमहानगरपालिका बिरुद्ध गत भदौ १५ गते उच्च अदालत पाटन हेटौंडामा रिट दर्ता गरेको थियो । न्यायधिस चण्डिराज ढकाल र राम प्रसाद अधिकारीको बुधबार बसेको संयुक्त इजलाशले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले निकालेको दोश्रो टेन्डर प्रक्रियालाई खारेज गरि अघिल्लो कम्पनीलाई नै काम कारवाही अघि बढाउन आदेश दिएको छ । मंसिर १२, २०७६
भर्खरै : भुकम्पको धक्का महशुस मंसिर ११, २०७६
हेटौंड़ाको गोरक्षनाथ माविमा लगाईएको महायज्ञ समापन, १ करोड ५० लाख संकलन हेटौंडा १८ हर्नामाडी फुर्केचौरमा रहेको गोरक्षनाथ माविलाई प्राविधिक शिक्षालय बनाउनको लागि मंसिर ३ गते मंगलबारबाट लगाइएको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ आज मंगलबार समापन भएको छ । प्रख्यात बाचन पण्डित दिनबन्धु पोखरेलले बाचन गर्नुभएको सप्ताह महायज्ञ समापनको दिन आज मंगलबार २२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको लेखा समिति संयोजक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए । मंसिर १०, २०७६
हेटौंडामा कुखुरा भन्दा प्याज महँगो ! खपतको आधा आयात नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य अहिले सम्मकै उच्च भएको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिले मंगलबारका लागि सुकेको प्याजको प्रतिकिलो होलसेल मूल्य नै दुई सय रुपैयाँ तोकेको छ । हेटौंडामा पनि प्याजको भाउ अहिले सम्मकै महँगो भएको छ । फलफुल तथा तरकारी व्यवसायी संघ मकवानपुरका अनुसार मंगलबार प्याजको होलसेल मूल्य १ सय ८० रुपैंया तोकिएको छ । यो अहिले सम्मकै महँगो मूल्य हो । सोमबार १ सय ६५ रुपैंयामा कारोबार भएको प्याज मंगलबार १५ रुपैंया प्रतिकिलो महंगिएको हो । मंसिर १०, २०७६